About NCCD | Network for Chin Community Development
Background of NCCD:
The Network for Chin Community Development (NCCD) isacommunity based organization based in Indo – Burma border. It was founded in 1995.
The aim of NCCD is to both help local people fulfill their basic needs and to empower them to improve their livelihoods. In this way our organization seeks to address the precarious position of Chin people, who live without rights under the strict control of the Burmese government. Many young people have left Chin State in search of work, resulting in communities with disproportionate numbers of elderly and children. Many Chin people understand thatademocratic development model will help them to stop the collapse of their society, but lack the knowledge to implement that model. In order to address these problems NCCD helps local people to develop their minds, creating self-reliance and moving the country towardsachange in the political system.
In order to achieve these aims NCCD holds village meetings, workshop, networking projects, community development trainings, distributes micro credit funds, and assists them in pig breeding, shop, paddy bank, sustainable farming projects that benefit the community asawhole. All of our projects are conducted through the formation of democratic committees at the local level. People use the profit to educate their children and improve their lives.
Core Principles (3)
(1) Grass-Roots Ownership of Natural Resources
(၁) အခြေခံလူထုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် ဖွံ.ဖြိုးရေး
မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့သည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် အမွေအနှစ်များအား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ စီမံပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
လူထုတွင် ၄င်းတို.နှင့်ပက်သက်သည့် မည်သည့်ဖွံ.ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်မှု(သို.) စီမံကိန်း ၄င်းတို.ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ထို.အပြင် တန်းတူညီမျှသည့်အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားခွင့်လည်းရှိရမည်၊ ရရှိထားသည့်သဘောတူညီမှုနှင့် ဘ၀နှင့်သက်ရှင်နေထိုင်ရေး လုံခြုံမှုအာမခံချက်အပြည့်အရရှိရမည်။
Development shall ensure the support of the required needs of future generations without destroying cultural heritage
၄င်းတို.၏ ယာဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ပျက်စီဆုံးရှုံးမှုမရှိစေပဲ၊ ၄င်းတို.၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက် လိုအပ်ချက်များကို လျော့နည်းထိခိုက်မှုမရှိစေပဲ၊ လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်စည်းပေးနိုင်စေရန်။
NCCD’s Principles(3) and ECDF principles(3) the same
ECDF၏ အခြေခံမူ(၃)ချက်ကို NCCDအဖွဲ.အစည်းကလည်း လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
အာဆီယံတက္ကသိုလ်များ နိုင်ငံအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု မြန်မာက အဆင့် ၄ သို့ လျော့ကျ December 13, 2018
အာဆီယံတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပတာ ၄ ရက်မြောက်နေ့ထိ ရောက်ရှိလာချိန်မှာ မြန်မာကိုယ်ကိုယ်စားပြု အားကစားသမားတွေဟာ ရွှေတံဆိပ်ရရှိမှု လျော့နည်းသွားပြီး ရွှေတံဆိပ်[...] […]
အမေရိကန်ဂိုးသမား ဇက်ခ်စတက်ဖန်ကို မန်စီးတီး ခေါ်ရန် အကြိုသဘောတူညီမှုရ December 13, 2018
မန်စီးတီးအသင်းဟာ အမေရိကန်ဂိုးသမား ဇက်ခ်စတက်ဖန်ကို ခေါ်ယူဖို့ အကြိုသဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်ရှိ မေဂျာလိဂ်ကလပ်[...]
အချက်ပေးသံ နားထောင်ပြီး လှိုင်းစီးသင်နေသည့် စပိန် မျက်မမြင်အမျိုးသမီးငယ် (ရုပ်သံ) December 13, 2018
မျက်မမြင် စပိန်အမျိုးသမီးငယ်တဦးဟာ ပင်ကိုယ်သိစိတ်နဲ့ ဆရာဖြစ်သူရဲ့ အချက်ပေးသံကို နားထောင်ပြီး လှိုင်းစီးသင်နေပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်[...] […]
အစိုးရနဲ့ မြောက်ပိုင်း ၃ဖွဲ့ သဘောတူညီချက် တရုတ်ကြိုဆို December 13, 2018
အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နဲ့ မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့သုံးဖွဲ့တို့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်ဟာဆိုရင် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တိုးတက်မှု ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်ဘက်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ […]
ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးနေရာနဲ့ ရေခဲ December 13, 2018
ပုဂံ-နေပြည်တော် အလုပ်သမားချီတက်ပွဲ နှိမ်နင်းခံရ December 13, 2018
ပုဂံသရပါဟိုတယ် ကနေအလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်ပြန်ရဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက်မနက်ပိုင်းကပုဂံကနေနေပြည်တော်ထိလမ်းလျှောက်ချီတက်တာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းတဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်သပိတ်ခေါင်းဆောင်အချို့လည်းဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ […]
သြစတေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တွေ့ဆုံ December 13, 2018
မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marise Payne ဟာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ […]
MDCF ခေါင်းဆောင် ဦးထင်ကျော်အမှု နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တင်
နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ ရန်ကင်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆို ခံထားရတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှု အင်အားစုကော်မတီ MDCF ခေါင်းဆောင် ဦးထင်ကျော်အမှုကို ဒီနေ့ နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့ပြီး စွဲချက်တင်မယ့်အမိန့်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးက ချမှတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
မင်းကွန်း အကယ်ဒမီကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ သတင်းစာရှင်းလင်း
စစ်ကိုင်းမြို့ မင်းကွန်းအကယ်ဒမီကျောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာက ကျောင်းကနေ ခွင့်ပြုထားတာတက် ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အကယ်ဒမီကျောင်းမှာ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးဥက္ကဋ္ဌ က မိန့်ကြားပါတယ်။ […]